IICERAMIC FLOOR PROS KUNYE NE-CONS - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Iiceramic Floor Pros kunye ne-Cons
Wamkelekile kwi-ceramic tile floos pros kunye ne-cons kunye nesikhokelo sokuyila ukukunceda ukuba uthathe isigqibo sokuba ngaba lolu hlobo lomgangatho lukulungele ukuyila kwakho kwangaphakathi. I-ceramic tile flooring ithandwa kakhulu phakathi kwabaninimzi abaninzi kuba ingasetyenziselwa naliphi na igumbi lendlu yakho. Uninzi lwabanini bamakhaya bayayisebenzisa kwiindawo ezixinene ngabantu, ezinje ngekhitshi kunye neendawo zokuhlambela kuba iyamanzi kwaye iyamelana nebala, nto leyo eyenza ukuba kube lula kakhulu ukucoceka.
Abanini bamakhaya abaninzi, ngakumbi kwimozulu efudumeleyo, basebenzise iithayile zeceramic ukwenza indawo enomtsalane kumagumbi abo okulala kunye namagumbi okulala. Xa ucinga ukuba loluphi uhlobo lomgangatho oza kuwugalela ekhayeni lakho, kuyanceda ukwazi ukuba awusoze uhambe gwenxa ngeethayile zekheram.
Nangona kunjalo, ubuninzi beethayile zeceramic zibonakala kwizindlu ezininzi kwaye kulula kakhulu ukuzicoca, umphezulu wazo onzima uzenza zingakulungelanga ukusetyenziswa kwezinye. Ngesi sizathu, nalu ulwahlulo lwezinto eziluncedo kunye nezingeloncedo ngokusebenzisa iithayile zeceramic njengesixhobo somgangatho.
Iinkonzo zeCeramic Flooring Tile
Uyilo - Enye yezona zinto zibalaseleyo malunga neethayile zodongwe kukuba zinoyilo olwahluka-hlukeneyo ngokuthelekiswa nezinye izinto zokwakha. Iindlela zangoku zokuvelisa zenze ukuba kube lula ukuba abavelisi beekheram benze izinto ezinokufakwa embossed okanye ziprintwe ngeendlela ezahlukeneyo.
Ngesi sizathu, wena, njengomnini-ndlu, unenkululeko yokufumana uyilo lwesiko okanye izinto ezenziwa ngetayile yakho yodongwe. Uya kufumana nayiphi na i-ceramic iipateni zethayile , ubeko okanye ii-aksenti ozifunayo, into engenakwenzeka ngezinye izinto zomgangatho. Bona Okuninzi iintlobo zeethayile zangasese kweli phepha.
Kukho iinkuni jonga iithayile yakhiwe ngeceramic enokuthi ikwazi ukuphindaphinda ukubonakala komgangatho wokhuni olomeleleyo. Umthi ujonga iithayile zomgangatho we ceramic zihlala zisetyenziswa kwiindawo apho ukusebenzisa umthi onzima kungenzeki njengakwigumbi lokuhlambela kunye neekhitshi.
Kwakhona, kunokuba ngumdla kuwe ukwazi ukuba iithayile zeceramic zinokuphinda zitshintshwe kwaye zisikwe ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngoonxantathu, iiplanga, okanye uxande, ezibenza zilungele nayiphi na ikona yendlu yakho.
Ukusebenza ngokungafaniyo kwodongwe iimilo zomgangatho wethayile kwaye uyilo lubenza balungele phantse nasiphi na isitayile sasekhaya onokucinga ngaso.
Ixabiso - I-ceramic tile flooring ngokungathandabuzekiyo yenye yeentlobo ezinokufikeleleka kakhulu kumgangatho onokufikelela phaya. Kwiimeko ezininzi, iithayile zeceramic zihlala zibiza njenge- $ 5 ngonyawo wesikwere. Ngokusekwe kumgangatho weethayile zeceramic, oku kufikeleleka kakhulu kubanini bamakhaya abaninzi.
I-hayley paige iilokhwe zomtshato 2016
Kwakhona, uya kufumanisa ukuba iindleko zizonke zokuba nomgangatho wethayile yodongwe ekhayeni lakho zitshiphu kakhulu kunezinye iindlela zomgangatho okhuni apho. Nangona kunjalo, kunokuba nomdla kuwe ukwazi ukuba akukho mda kumaxabiso eethayile zeceramic.
Ngokusekwe kulwenziwo ngokubanzi kunye nomgangatho weetiles zeceramic, zinokubiza ukuya kuthi ga kwi-60 yeedola ngonyawo wesikwere. Kodwa ngokusekwe kumgangatho womgangatho oza kuwufumana ngezi tile zeceramic, zifanelekile yonke ipenny.
Ulondolozo - Ukukhululeka kokugcina i-ceramic tile flooring yenye yezinto eziphambili abaninikhaya abathanda ngayo. Ukuba ukhe wakhathazeka ngamabala, ulwelo, kunye nobumdaka obuchaphazela ukubonakala kwezinto zakho zaphansi, oku akusebenzi kwiithayile zeceramic.
Iithayile ze-ceramic ezimenyezelelweyo ziyaziwa ukuba ziqulathe umaleko okhuselayo owenza ukuba zinganyangeki emanzini nakumabala. Esi sesinye sezizathu eziphambili zokuba ufumane uninzi lwabanini makhaya besebenzisa iithayile zekerayile zodaka kwiindawo ezimanzi emakhayeni abo, ezinje ngezindlu zangasese, amagumbi okuhlamba impahla, kunye namakhitshi. Bona ezongezelelweyo iintlobo zeethayile zekhitshi Apha.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iithayile zeceramic azifunxi amabala, ulwelo kunye nokungcola, okuthetha ukuba zonke ziphumla ngaphezulu, zenze kube lula kuwe ukuzisula usebenzisa ilaphu lokulahla. Kungakunika umdla ukwazi ukuba ungasebenzisa phantse naluphi na uhlobo lokucoca iarhente oyikhethayo, nokuba sisicoci, iblitshi okanye neasidi.
Kungenxa yokuba, ngokungafaniyo nezinye izinto zaphantsi komhlaba, i-ceramic tile flooring ayichaphazeleka ngokulula nangayiphi na into yokucoca, okanye iiarhente zemichiza. Ukugcinwa kwesiqhelo kolu hlobo lophahla kubandakanya ukutshayela okanye ukucoceka usebenzisa ibrashi ethambileyo ukulahla nabuphi na ubumdaka okanye inkunkuma evulekileyo.
Ukuba kunokwenzeka ukuba unazo naziphi na iithayile zekheram ezingagangathwanga, qinisekisa ukuba zitywiniwe ukuzikhusela kulwelo nakumabala.
Ukuzinza - Njengoko bekutshiwo ngaphambili, iithayile zeceramic zinzima kakhulu ukuba zingaqhekeka. Xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zemathiriyeli yaphansi, i-ceramic tile flooring inzima kakhulu, iqinile, yomelele, kwaye izinto zayo zikumgangatho ophezulu.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iithayile zeceramic azinakuchukunyiswa lula ngumonakalo womzimba ngaphandle kokuba awunamdla wokuzinyamekela. Ukugcina iithayile zakho zekheram kumgangatho ofanelekileyo, qinisekisa ukuba akukho zinto zinzima ziyekwe kuwo ngenxa yokuba zinokushiya iintanda.
Ekuphela kwesisombululo kwithayile eqhekekileyo okanye eyonakalisiweyo yokuyifaka endaweni entsha. Nangona kunjalo, inkqubo yokutshintsha i-ceramic tile ilula kwaye iyabiza. Ukuba unomdla wokugcina i-tile yakho ye-ceramic tile, ingahlala iminyaka emakhulu ngelixa i-quality yayo ihambile.
Iindleko zeCeramic Flooring tile
Ufakelo - Enye yezinto abanini bezindlu abayixabisi malunga ne-ceramic tile flooring kukuba kuyabasebenzi kakhulu kwaye ngandlela-thile kunzima ukuyifaka. Ukuba ujonge ukubeka izakhono zakho ze-DIY ekusebenziseni kakuhle, ukufaka iithayile zeceramic ayingomsebenzi ofuna ukuqala ngawo.
Xa kuthelekiswa nezinye izinto zokwakha iiplanga ezinje nge-vinyl kunye ne-laminate, ekulula kakhulu ukuyifaka, uya kufuna igcisa ukuba lincedise kwinkqubo yokufaka iithayile zekheram.
Kungenxa yokuba inkqubo yokufaka iithayile zeceramic inzima kwaye ifuna izakhono ezikhethekileyo kunye namava ukuba ufuna ukuba imveliso yokugqibela ibenomtsalane.
Ukufakelwa ngokufanelekileyo kweethayile zekheram kuqala ngocingo lwesamente olubizwa ngokuba ngumncedisi wethayile ukuba unezinto ezenziwe ngomthi, ezonyusa indleko, ixesha kunye nomsebenzi ochithwe phantsi.
Ukumisa i-tile yakho ye-ceramic tile kulula kakhulu kunokuba ungacinga, kungenxa yoko kucetyiswa ukuba ufumane iinkonzo zengcali. Nangona kunjalo, ukuba ucinga ukuba ungcono xa ufaka i-flooring ngokwakho, unokufuna ukuqala ngemveliso ekulula ukuyifaka.
Kungcono ukunqanda iithayile zamatye ezipholileyo, iithayile ezinkulu, kunye neetayile zodongwe kuba zifuna inqanaba eliphezulu lobuchule.
Ukutyibilika - Njengokuba iithayile zeceramic kulula kakhulu ukuzicoca, azilungelanga iindawo eziba manzi kakhulu. Kuba uninzi lweethayile zeceramic zenziwe ngezinto ezilukhuni kunye nezendalo, zinokuba yingozi kukhuseleko lwakho.
Kungenxa yokuba imiphezulu yeethayile zeceramic ziyamtyibilika kakhulu xa zimanzi kwaye zinokuphela zibangela ukwenzakala kuye nabani na ome phezu kwazo, ahambe, okanye abaleke azinqumle ngaphandle kokuqaphela ngokwaneleyo.
Ngesi sizathu, iithayile zeceramic ayisiyonto ikhethekileyo kumakhaya apho kukho abantwana abancinci, izilwanyana zasekhaya, abantu abadala, okanye abantwana abakhutheleyo. Ukuba ufuna ukunqanda iingozi ezinjalo ekhayeni lakho, unokufuna ukuqaphela ukubeka ikhaphethi okanye ityali ngaphezulu kwetayile yakho yodongwe.
Kubanda kakhulu - Esinye isizathu sokuba abanye abaninimzi bangayithandi i-ceramic tile flooring emakhaya abo kukuba kunokubanda kakhulu kwiinyawo zabo. Oku kuthetha ukuba ngeenyanga zobusika, i-flooring ayinakukonwaba ukuhamba, ngakumbi ngeenyawo ezingenanto.
Oku kunokuba yinto engathandekiyo kubantu abafumana iinyanda ngenxa yokubanda komgangatho. Oku kuthetha ukuba kuya kufuneka ufumane indlela yokujongana nale meko, efuna ezinye iinkcukacha ekusenokwenzeka ukuba awuzange uzilungiselele.
Ukuthintela iithayile ezibandayo zeceramic, kuya kufuneka ukhethe ubushushu obuphakathi, ukufudumeza okuqaqambileyo, okanye ukubeka iiragi kunye neekhaphethi ngaphezulu komphezulu.
Iimpawu zeTayile eziphezulu zeCeramic
Nangona usenokuba uvile ngeempawu zeceramic ezininzi, bambalwa kakhulu abavelisi abalapha. Oku kulandelayo zezinye zezona zinto zihamba phambili kubenzi beetayile zeceramic kulo lonke elaseMelika;
• Kumgangatho weShaw.
• Ithayile yeMarazzi.
• Ithayile kaMohawk yodongwe.
I-Acme Brick Tile kunye neTye.
Ngaphambi kokuthenga nayiphi na into ephathekayo, kubalulekile ukuqaphela ezinye izinto ezibalulekileyo. Ufuna ukuqinisekisa ukuba yinto ebonakalayo onokuyifumana ngaphandle kokubeka esichengeni impilo yakho yezemali kwaye ilingana neemfuno zakho zoyilo lwangaphakathi ngokugqibeleleyo.
Ngaba zikhona iingenelo zethayile yodongwe kunye neengozi esizishiyileyo? Sazise iingcinga zakho ekusebenziseni i-ceramic tile flooring kwicandelo lamagqabaza. Ukufumana umxholo onje ngolu tyelelo kwiphepha lethu le- i-porcelain vs tile yodongwe .
Ndithembise ibhendi yomsesane kuye
ndiyifumene le uyifunayo
iilori zokutya eziqeshwayo kufutshane nam
uyihombisa njani imoto yomtshato